उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो, दुई महिनामा २६५ दर्ता | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा दुई सय ६५ उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये साउनमा एक सय ६५ र भदौमा एक सय उद्योग दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय साना तथा घरेलु र मझौला उद्योग खुल्ने क्रम बढेको कार्यालय प्रमुख उमबहादुर वलीले बताए ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा वनजन्य उद्योग दर्ता भएका छन् । उक्त अवधिमा कृषि तथा वनजन्य एक सय ९४, सेवामूलक ३३, उत्पादनमूलक २१ र पर्यटन १७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये कृषि तथा वनजन्यमा पाँच सय ९८, सेवामूलकमा ९९,उत्पादनमूलकमा एक सय एक र पर्यटनमा ४८ जनाले रोजगारी पाएको कार्यालय प्रमुख वलीले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा दर्ता भएका उद्योगमा कूल रु ४९ करोड ९६ लाख ८० हजार लगानी भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका सात सय ३१ उद्योग दर्ता भएका थिए । ती उद्योगमा करिब रु एक अर्ब २० करोड ८७ लाख ४२ हजार तीन सय २७ लगानी भएको थियो । गत वर्ष दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी तीन सय ७० वटा कृषि तथा वनजन्य रहेका छन् । ती उद्योगमा करिब रु ५८ करोड ९३ लाख ४३ हजार दुई सय लगानी भएको थियो । त्यस्तै उक्त अवधिमा दर्ता भएका एक सय ५० सेवामूलक उद्योगमा रु २० करोड ५० लाख २२ हजार लगानी भएको थियो भने एक सय १९ उत्पादनमूलक उद्योगमा रु ३२ करोड ७३ लाख लगानी भएको थियो । ती उद्योगमा करिब तीन हजार जनाले रोजगारी पाएका थिए ।
प्रदेश नं ५ सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग दर्तामा छुटको योजना ल्याएपछि दाङमा २४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा भदौ अन्तिमसम्म २४ वटा विभिन्न प्रकृतिका उद्योग निःशुल्क दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि दर्ता शुल्क छुट गर्ने घोषणा गरेपछि उद्योग दर्ता गर्नेहरु बढेको कार्यालय प्रमुख वलीले बताए । जिल्लामा निःशुल्क दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी २० वटा कृषि उद्योग रहेका छन् । प्रदेश नं ५ सरकारले भदौ ११ गते प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा वाणिज्यबाहेक अन्य उद्योगको दर्तामा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्लामा अहिले रु. पाँच लाखदेखि रु। पाँच करोडसम्म पूँजी भएको उद्योग दर्ता गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख वलीले बताए । त्यसैगरी रु। २० लाखदेखि ५० लाखसम्म पूँजी भएको उद्योग दर्ताका लागि रु। १५ हजार र रु। ५० लाखदेखि एक करोडसम्म पूँजी भएको उद्योग दर्ताका लागि रु। २५ हजार शुल्क लाग्ने गरेकोमा अहिले निःशुल्क गरिएको जनाइएको छ ।